Lalao 8 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (30 Desambra) | Vaovao IPhone
Lalao 8 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (30 Desambra)
Efa hifarana ny taona 2016 isika fa tsy mijanona ny tolotra sy fihenam-bidy ao amin'ny App Store. Androany aho mitondra safidy vaovao lalao sy fampiharana maimaimpoana izay aloa matetika.
Aza adino fa maharitra ireo tolotra ireo, mandritra ny fotoana tena voafetra, ary tsy fantatray hoe rahoviana ny mpamorona ny fampiharana tsirairay no hamerina azy ireo amin'ny vidiny mahazatra. Izahay dia afaka manome toky fa amidy izy ireo izao, amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, ka aza mieritreritra be loatra sao ho tara ianao.
2 PhotoJus Cute Fog FX Pro - Pic Effect ho an'ny Instagram
3 Boky fandokoana - sary ho an'ny ankizy
4 Fotocam Light Pro - Photo effects for Instagram
5 Lalao bibikely kilasy voalohany ho an'ny ankizy manana fahaiza-manao
7 Studio Music Player | Play mozika amin'ny Full HD
8 Vanim-potoana hazo
Tilikambo miboiboika Is a lalao izay mora lalaovina satria sarotra ny manatratra, ary mampiankin-doha izaitsizy. Tsy maintsy apetrakao eo ambonin'ilay sehatra maitso ilay boaty kely hitanao eo ambony. "Izany dia mitaky fifantohana sy reflexes haingana mba hampipoipoitra ny fotoana lava."
Tilikambo miboiboika Izy io dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
PhotoJus Cute Fog FX Pro - Pic Effect ho an'ny Instagram
Amin'ny alàlan'ity rindranasa ity ianao dia afaka mampihatra vokan'ny zavona any am-sarinao. «PhotoJus Cute Fog FX manova ny sarinao […] miampy ny vokatry ny zavona fitaratra amin'ny sarinao! Ny vokany rehetra dia namboarin'ireo mpaka sary sy mpanakanto matihanina mba hanome anao ny vokatra mahavariana indrindra amin'ny sarinao.
PhotoJus Cute Fog FX Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
Boky fandokoana - sary ho an'ny ankizy
Amin'ity tranga ity dia hitantsika ny fampiharana ao amin'ny sokajy fanabeazana natao manokana ho an'ny kely indrindra amin'ny trano ary angamba ho an'ireo izay tsy dia tanora loatra. Boky handokoana ireo sary izay efa tafiditra ao na ireo izay nataon'ny zaza irery.
Boky fandokoana - sary ho an'ny ankizy Izy io dia manana vidiny mahazatra 9,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
Fotocam Light Pro - Photo effects for Instagram
Ity dia fampiharana retouching sary miaraka amin'izany azonao atao ny manampy "jiro miloko amin'ny sarinao".
Ovay ho lasa vokatra mahafinaritra isan-karazany ny sarinao ankehitriny amin'ny alàlan'ny fampidirana jiro tsara tarehy! Ny vokany rehetra dia namboarin'ireo mpaka sary matihanina sy mpanakanto tena izy mba hanome ny vokatra mahavariana indrindra amin'ilay sary.
Fotocam Light Pro Izy io dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
Lalao bibikely kilasy voalohany ho an'ny ankizy manana fahaiza-manao
Na dia afaka nanandrana kely aza ny mpamorona ity lalao ity handika ny lohateny, ny marina dia fitaovana tsara iray ao anatiny io lalao mihoatra ny zato ho an'ny kely indrindra amin'ny trano hianarana ny fototra matematika.
Ity lalao ity, izay ny lohateny tsy mety averiko haha, dia manana vidiny mahazatra 3,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
En HappyTruck ny sisa hataonao dia ento miaraka amin'ny kamio ny voankazo. Toa mora ve? Tsy dia hoe loatra satria mora latsaka ny voankazo ary mila mitondra bebe kokoa ianao, ny tsara kokoa, mba hahazoana isa tsara kokoa.
HappyTruck Izy io dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
Studio Music Player | Play mozika amin'ny Full HD
Ary avelantsika hifindra amin'ity "mpilalao tokana" ity ny lalao ahafahantsika mihaino ny mozika ankafizintsika miaraka amina kalitao feo matihanina, na farafaharatsiny izay no manome antoka ny mpamorona azy. Na ahoana na ahoana, satria maimaim-poana izany dia andramantsika izany, sa tsy izany?
Studio Music Player Izy io dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
Ary mifarana amin'ny lalao hafa ho an'ny ankizy izahay, izay miala sasatra ary tsy maintsy ampifaliana. Vanim-potoana hazo «Ento ny zanakao ao a dia majika sy tsy hay hadinoina mankany anaty ala feno loko, zavaboary liana ary fanamby mahafinaritra. Hamakivaky ny ala mikitroka ny zanakao ary hizaha ireo ala toy ny lamba mihosin-volo. "
Ny tena mampiavaka azy dia:
Asandrato ny fahafantaran'ny ankizy ny karazana ala sy ny tsingerin'ny natiora
Mamporisika ny fisainana sy ny lojika, anisan'izany ny faminaniana ny fanovana
Hatsarao ny fanekena isa
Manohana ny fampandrosoana ny fahaiza-moto tsara
Mifanaraka amin'ny fanabeazana marobe
Manome fanentanana voalanjalanja
Lalao mini mahafinaritra sy mandrisika telo
Vokatry ny feo azo tsapain-tanana, sary ary sarimiaina natao ho an'ny ankizy
Fomba fanatontosana fianarana
Mety ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 8 taona
Vanim-potoana hazo Izy io dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao 8 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (30 Desambra)
Samsung dia mety ho mpamatsy ofisialy ny efijery 5,8-inch an'ny maodely iPhone vaovao
Jack Dorsey, tale jeneralin'ny Twitter: "Mila mahay manitsy bitsika ianao"